Inona no haben'ny hazo vita amin'ny ankapobeny? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no haben'ny hazo vita amin'ny ankapobeny?
1.Specification ny hazo matevina UV hazo cat
Io gorodona io dia vita amin'ny hazo matevina rehefa avy masinina, ary sitrana amin'ny lakandrano ny fotony. Ny fitaovana mahazatra dia: alder, oak, lavenona, maple sy serizy, sns. Misy koa ny gorodona misy karazana hazo tsy fahita firy ary sarobidy toy ny andramana sy ny bolabola.
Ity gorodona ity dia manana tombantombana maro, amin'ny ankapobeny: 450 mm x 60 mm x 16 mm, 750 mm x 60 mm x 16 mm, 750 mm x 90 mm x 16 mm, 900 mm x 90 mm x 16 mm, sy ny sisa.
Ny loko vita amin'ny hazo matevina vita amin'ny UV dia azo zaraina amin'ny karazana marevaka sy ny karazana matt. Rehefa vita ny fitsaboana dia tsy handratra ny maso ny gorodona noho ny famerenana maivana, tsy hianjera noho ny gorodona malefaka be loatra ary ny vokatry ny haingon-trano matotra. Izy io dia tena tsara, io dia mahazatra amin'ny haingo an-trano.
Ity karazana gorodona ity dia vita amin'ny hazo madio miaraka amin'ny texture mafana sy fahatsapana ho tsara tongotra, izay tena misy sy voajanahary. Ny latsaky ny velaran-tany dia malama sy fanamiana, misy ny maro, maro ny safidy, ary ilaina ny fikojakojana. Na izany aza, noho ny toetra ara-batana, ny gorodona toy izany dia mora iharan'ny fanovana sy ny fiverenana amin'ny fihodinan'ny tany maina sy mando, ary somary manahirana ny fametrahana azy.
Famaritana ny gorodona vita amin'ny hazo matevina
Ny gorodona antsoina hoe gorodona vita amin'ny hazo matevina dia ahitana ny takelaka maromaro na ny sosona voana marobe izay be menaka ary tsaboina amin'ny bibikely sy ny matevina ho toy ny fitaovana fototra, ary ny takelaka iray miaraka amin'ny savaivony manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny D5 mm dia ampiana tahaka ny takelaka. Ny fiasa coating lacquer dia ampiharina amin'ny lacquer amin'ny làlan-tany sy ny gorodona vita amin'ny hazo.
Ny mombamomba an'io gorodona io dia amin'ny ankapobeny: 1802 mm x 303 mm x 15 mm (12 mm), 1802 mm x 150 mm x 15 mm, 1200 mm x 150 mm x 15 mm, ary 800 mm x 20 mm x 15 mm.
Satria ity rafi-trano ity dia mampiasa "plywood", dia voavaha ihany ny olana momba ny fanodinana hazo. Ankoatra izany, dia mora ny miantsoroka, manana fahatsapana tongotra tsara, manana fanoherana tsara ny hadisoana, ary mora ampiasaina. Na izany aza, malefaka ny vatan'ny sasany karazana eto amin'ity gorodona ity, dia mora ny mamokatra indentations na scratches.
3.Sintesin'ny fanaka laminate
Io karazana gorodona io dia ankamaroan'ny vokatra haondrana.apetraka vita vita amin'ny fibre fibre haavo sy avo lentika ary takelaka sosona alumina. Ny voafaritra amin'ity karazana gorodona ity dia mitovy, amin'ny ankapobeny 1200 mm x 90 mm x 8 mm, ary misy vokatra miaraka amin'ny hatevin'ny 7 mm.
Ity karazana gorodona ity dia misy karazana fampiasana, karazan-doko maro, ary manana tombony amin'ny haingon-trano mafy, tsy misy fanovana, fanoherana afo, hanoherana ny fikojakojana, fikojakojana tsotra, fananganana mora sy ny sisa. Na izany aza, io fitaovana io ihany koa dia manana fatiantoka, izany hoe, ny hatotra ho mangatsiaka ary mihasarotra.
Inona no haben'ny hazo vita amin'ny ankapobeny? Ny atiny mifandraika